KIA , MOHAVE , 2017 , BGO – Super Seven Stars
KIA , MOHAVE , 2017 , BGO
Buy For 73 500$
Warranty Expiry Date 24 . March .2022
KIA Mohave ကားသည် Engine power 3.0 L / Diesel /8 Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Luxury Grade /7ယောက်စီး ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်…….
2WDထက်သာလွန်သော4WheelDriveအသုံးပြုထားသောကြောင့်DrivingPerformanceပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊လမ်းကြမ်းများတွင်ပိုမိုငြိမ်သက်စွာမောင်းနှင်နိုင်ခြင်း၊ကား လမ်းပေါ်မှဘီးချော်ခြင်း(စလစ်)ဖြစ်ခြင်း များကိုကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
KIA Mohave သည် 3.0 liter Multi-Port Injection V6 Gasoline Engine ဖြစ်ပြီး 8 Speed Automatic Transmission ဖြစ်ပါတယ်။
KIAMohave၏အတွင်းခန်းမှာလှပသပ်ရပ်ပြီးကျယ်ဝန်းသောကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ ကားမောင်းနှင်ရာတွင်က်သောင့်သက်သာနှင့် အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ထိုင်ခုံများမှာ Leather Seats များဖြစ်သော ကြောင့်ရိုးရိုး cloths seats ထက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာသွားလာနိုင်သည့်အပြင်မတော်တဆ ကားပေါ်တွင် ဖိတ်စင် စွန်ထင်းခြင်းများကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် အနံအသက် ဆိုးများထွက်ခြင်း မှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Driver ထိုင်ခုံမှာ 10 way driver Seats adjust ဖြစ်သောကြောင့် ကားမောင်းသူ၏အရပ် အနိမ့်၊အမြင့် ခန္ဓ္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားအပေါ်မူတည်၍ ထိုင်ခုံကို လိုအပ်သလိုအနိမ့်၊အမြင့်၊ရှေ့တိုး၊နောက်ဆုတ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ခါးအနေအထားကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင်သော်လည်းကောင်း၊ကျောမှီအနေအထား၊စသည်တို့ကို စိတ်တိုင်းကျလိုအပ်သလို ချိန်ညှိပေးနိုင်သည့်အပြင် မိမိတို့စိတ်တိုင်းကျချိန်ညှိထားသော အနေအထားနှစ်မျိုးကိုပါ Memory မှတ်ထားနိုင်သည့်အတွက်လည်း အခြားကားများ နှင့်မတူဘဲသက်တောင့်သက်သာဖြင့်စီးနှင်းသွားလာနိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် Button Starter ဖြစ်သောကြောင့် သာမန် Key များကဲ့သို့သော့တံဖြင့်လှည့်ဖွင့်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့်စက်နိူးစက်သတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
High Way လမ်းမများပေါ်တွင်မောင်းနှင်ရာ၌ အမြန်နုန်းကိုလိုသလိုသတ်မှတ်ပေးထားပြီးလီဗာနင်းစရာမလိုပဲ မောင်းနှင်နိုင်သည့် Cruise Control System ပါဝင်သည့်အတွက် အရှိန်လွန်မောင်းနှင်မိမှာကိုလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုသည့်အပြင် ယာဉ်မောင်းမှလီဗာအချိန်ပြည့် နင်းထားစရာမလိုသောကြောင့် သက်သောင့်သက်သာဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
Mohave ၏ စီယာရင် ကိုလည်း မောင်းနှင်သူ စိတ်တိုင်းကျ အနိမ့်အမြင့်ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း manual မဟုတ်ပဲ ခလုတ်နှိပ်ပြီး လိုအပ်သလို ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
KIA Mohave ၏ ဒိုင်ခွက် မှာ 3.5” mono cluster ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Radio,CD,MP3 AUX,I pop,USB Connection Radio, CD, MP3 များ အသုံးပြုနိုင် သော Audio System 30 B စနစ်တပ်ဆင်ထားသဖြင့် ပိုမိုကြည်လင် ပြတ်သား သော အသံအရည်အသွေးရရှိစေပြီးကားမောင်းနေစဉ်အတွင်းရေဒီယို၊FM စသည်တို့ဖမ်းယူနား ဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Head lamp washer ပါဝင်သောကြောင့် High way ခရီးသွားလာလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရှေ့မီးကြီးမီးထွန်းရာတွင် အနှေုာင့်အယှက်ဖြစ်စေမည်ဖုန်၊ အမှိုက်သရိုက် များ ကပ်ညှိနေပါက ကားမောင်းနှင်နေရင်းဖြင့် ရေဖျန်းသန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။
Electric Stability Control System သည် Wheel Speed Sensor နှင့် Steering Angle Sensors တို့ကိုပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်ကား၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ကားမတော်တဆဖြစ်ခြင်းမှလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးပါသည်။
KIA Mohave တွင် HAC– Hill Assist Control ပါဝင်ပါသည့်အတွက် တောင်အမြင့်ပိုင်းများ၊ ကုန်းအမြင့်ပိုင်းများတွင် ရပ်တန့်ပြီးကားပြန်ထွက်တဲ့ အချိန်တွင်နောက်သို့ ပြန်မလိမ့်အောင် ထိန်းထားပေးနိုင်ပါသည်။
ညအချိန်ကားမောင်းနေစဉ် မိမိယာဉ်နောက်မှကား၏ မီးကြောင့် ဖြစ်စေသော မျက်စိ စူးရှမှုကို ကာကွယ်ရန် နောက်ကြည့်မှန်းအား မှေးမှိန်၍ အလင်းပြန် မှုအားနည်စေခြင်း။ သို့သော် ဘက်ဂီယာထိုး လျှင် နောက်ရှိမြင်ကွင်းအား ပြတ်သားစွာမြင်စေရန် ထိုစနစ် အားရပ်တန့်ပြီး ပုံမှန်အလင်းပြန်မှု အားပြန်လည် ရရှိစေရန်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Original Rear View Camera ပါရှိခြင်းကြောင့် ကားပါကင်ထိုးရာတွင် မြင်းကွင်းရှင်းလင်းစွာ အလွယ်တကူကြည့်ရှု့ပြီး ကားပါကင်ထိုးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ….
အိမ်စီးကားကိုသာ ၀ယ်ယူထားလိုသော်လည်း ပစ္စည်းအတော်များများကို သယ်ယူရာတွင်အဆင်ပြေလိုသော Customer များအတွက် KIA Mohave ၏ နောက်ဘက်ရှိထိုင်ခုံ နှစ်တန်းကို ခေါက်ထားပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို သယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Super Seven Stars မှ ရောင်းချပေးနေသည့် Kia Pre Owned ကားများကို Cash Down (သို့မဟုတ်) Hire Purchase စနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိူင်ပါတယ်။
Selling Price 73,500
30% Down Payment 24,071
Monthly Payment For 1 Year 4,595
30% Down Payment 24,586
Monthly Payment For2Years 2,446
30 % Down Payment 25,100
Monthly Payment For3Years 1,734